Ntuziaka Ahụike CDC: ezughị oke maka ahịrị Carnival Cruise
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ntuziaka Ahụike CDC: ezughị oke maka ahịrị Carnival Cruise
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
25 min gụọ
Carnival Cruise Line na -ekpori ndụ. Nwee Nchekwa. Emebela usoro na usoro na ndụmọdụ ndị ọkachamara ahụike. Emebere ha ka ha dị irè ma na -eme mgbanwe ka ọnọdụ ahụike ọha ugbu a na -amalite.
Ruo ọkwa ọzọ, arụmọrụ Carnival niile ga -emezu ụkpụrụ a. Nke mere na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri nwere ike ịmalitegharị ọrụ nke ọma wee jigide ntụkwasị obi nke ebe ndị ha gara ma nyefee na njem ha na ahụmịhe ndị ọbịa.
Line Carnival Cruise Line bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ malitere n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Baltimore kemgbe ụlọ ọrụ kwụsịtụrụ ọrụ.
Carnival Pride ga-apụ taa njem ụgbọ mmiri ụbọchị asaa gaa Bahamas, na-eleta Nassau, Freeport na agwaetiti nkeonwe Half Moon Cay.
Tupu ọpụpụ, a na -eme emume '' Back to Fun '' na ọdụ ụgbọ mmiri ebe Onye isi Carnival Christine Duffy, Carnival Pride Captain Maurizio Ruggiero na Onye isi oche Port of Baltimore bụ William P. Doyle bepụla emume mmachi wee nabata ndị ọbịa mbụ nọ n'ụgbọ ahụ. .
Christine Duffy kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ịlaghachi na Baltimore, na -enye ndị ọbịa anyị ezumike ezumike ha ji ndidi na -eche mana na -akwadokwa akụnụba mpaghara ma na -enye ndị ọrụ ụgbọ mmiri ohere ịkwado ezinụlọ ha n'ụlọ." , onye isi oche nke Carnival Cruise Line. "Baltimore abụwo ezigbo onye mmekọ ruo ihe karịrị afọ iri ma anyị nwere obi ụtọ ịlaghachi azụ na ahịa n'ahịa a bụ isi nke na -eje ozi ọtụtụ narị puku ndị ọbịa na Northeast na n'akụkụ Oké Osimiri Atlantic."
"Lee nnukwu ụbọchị maka Port nke Baltimore!" kwuru na Port of Baltimore Executive Director William P. Doyle. "Anyị echerela ogologo oge ịnabataghachi mpako Carnival na Charm City. Baltimore's Cruise Maryland dị egwu - ọdụ ụgbọ mmiri anyị dị na Interstate 95 na ọdụ ụgbọ elu BWI Thurgood Marshall dị naanị nkeji iri na ise. Ọdụ ụgbọ mmiri na -anọdụ n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri Inner Harbor nke ama ama Baltimore, yana Federal Hill, Fort McHenry, na Fells Point. Enwere ọtụtụ nlegharị anya, iri nri na ịzụ ahịa. Ya mere jiri ụgbọ mmiri si na Baltimore, kporie ndụ n'obodo ukwu anyị, wee banye n'ụfọdụ paradaịs ebe okpomọkụ dị egwu n'ụwa. "
Line Carnival Cruise Line bidoro mmemme njem ụgbọ mmiri afọ mbụ site na Baltimore na 2009 ma kemgbe ahụ eburula ihe karịrị otu nde ndị ọbịa, na-eme ka Carnival bụrụ onye ọrụ ụgbọ mmiri nke mbụ n'ọdụ ụgbọ mmiri.
N’ọnwa Nọvemba, ụgbọ mmiri ọhụrụ, Carnival Legend, ga -anọchi Carnival Pride na Baltimore mgbe Carnival Pride na -atụgharị ọpụpụ na Tampa.
Carnival na -enye ọtụtụ nhọrọ ụgbọ mmiri sitere na Baltimore, gụnyere:
Ụgbọ mmiri ụbọchị isii na asaa gara Bermuda na Bahamas
Njem njem ụbọchị asatọ na Canada/New England na Caribbean
Ụgbọ njem Carnival ụbọchị 14 na-aga n'Ọwa Mmiri Panama na mpaghara ndịda Caribbean.
Njem njem ezumike nke ejị n'ụgbọ Carnival Legend na Carnival Legend na Machị 2022 ya na mmemme pụrụ iche na ntụrụndụ yana njikọ Carnival Cruise Line's 50.th Mmemme ụbọchị ọmụmụ.
Usoro nkwekọrịta nke Carnival gafere ndụmọdụ nke Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US.
Carnival ga -aga n'ihu na -eme njem ụgbọ mmiri ọgwụ mgbochi dị ka CDC kọwara, gụnyere ịnwe ndị ọrụ ụgbọ mmiri ọgwụ mgbochi ọ bụla.
N'ọtụtụ ịkpachara anya na nzaghachi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke COVID-19 na US kpatara Delta variant, Carnival nọ na-emelite usoro iwu na ihe ndị chọrọ gbasara nnwale ụgbọ mmiri maka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi zuru oke yana amụma nkpuchi ụgbọ.
Carnival na -atụ anya na usoro ndị a ga -adị nwa oge, ọ ga -edozigharị usoro iwu anyị dabere na ndụmọdụ ndị ndụmọdụ ahụike na ahụike ọha.
Nke a bụ usoro Carnival Cruise Line nabatara ma gwa ya
Ndị ọbịa niile kwesịrị iji nlezianya nyochaa ndụmọdụ ahụike tupu ịdebanye aha na tupu njem na weebụsaịtị anyị yana Ebe nrụọrụ weebụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) .
NKWUKWU NKWUKWU: Iji jikwaa ụgbọ mmiri anyị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ dị ezigbo mkpa ka ndị ọbịa niile nọrọ na nche maka otu ajụjụ ozi email ịgba ọgwụ mgbochi tupu ọ ga-emecha mezuo maka onye ọ bụla nọ na ndoputa. A na -agwa ndị ọbịa ka ha melite profaịlụ ha na Carnival.com na ozi kọntaktị ha ugbu a ka anyị ga -esi na -ezirịta ozi site na ozi ịntanetị. Biko gụọ akwụkwọ ozi anyị niile wee mezuo arịrịọ niile maka ozi mbata. Ịghara irube isi na arịrịọ ozi ụgbọ mmiri tupu oge eruo ga-ebute kagbuo.
ỊGBA ỌGWỤGWỌ & ỤTỌ ỤTỌ
Ndị ọbịa ọgwụ mgbochi ọ bụla
Ụgbọ njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị maka ndị ọbịa natara ọgwụ ikpeazụ COVID-19 akwadoro opekata mpe ụbọchị 14 tupu ụbọchị ịkwọ ụgbọ mmiri ma nwee ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Maka ụgbọ mmiri na-apụ ruo Septemba 12, 2021, ndị ọbịa ọgwụ mgbochi ọrịa ga-ewetakwa nsonaazụ ọjọọ nke nnwale COVID-19 (PCR ma ọ bụ antigen) ewepụtara n'ime ụbọchị atọ tupu mgbaba. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọ mmiri bụ na Satọde, enwere ike ịnwale ule oge ọ bụla site na Wenezde ruo Fraịde. Ndị ọbịa nwekwara ike ịnwale ule n'ụtụtụ mbata ka ọ bụrụ na enyere ha nkwa ịnata nsonaazụ ule ha tupu oge nbanye ha.
Site na ụgbọ mmiri dị na Septemba 13, 2021, CDC chọrọ nnwale tupu njem ụgbọ mmiri maka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi ga-ewere n'ime ụbọchị abụọ tupu ụbọchị ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọ mmiri bụ na Satọde, enwere ike ịnwale ule na Tọzdee na Fraịde, yana mbubreyo Satọde, ọ bụrụ na ejiri n'aka na ị ga-enweta nsonaazụ gị n'oge maka nbanye.
A ga -achọ akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, dị ka ndị a, na ọdụ ụgbọ mmiri tupu ịbanye:
Ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa mbụ nke ndị ụlọ ọrụ ahụike obodo nyere nke nyere ọgwụ mgbochi (ya bụ, Kaadị Vaccination Record US CDC). Anaghị anabata nnomi ma ọ bụ foto.
Asambodo COVID-19 dijitalụ (koodu QR a na-anabata), ndekọ nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 sitere na onye na-ahụ maka ahụike (email dijitalụ mbụ nabatara), ndekọ ahụike elektrọnik nkeonwe ma ọ bụ ndekọ Sistemụ Ozi Ọchịchị.
Aha na ụbọchị ọmụmụ na ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga -adarịrị akwụkwọ njem onye ọbịa wee gosi onye ọbịa ọgwụ mgbochi ọrịa. Ụbọchị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga -egosi onye ọbịa emechala ọgwụ ndị achọrọ karịa ụbọchị 14 tupu ụbọchị ịkwọ ụgbọ mmiri. Nke a pụtara na n'ụbọchị ọpụpụ, ụbọchị iri na ise ga -agafe kemgbe enwetara ọgwụ ikpeazụ. Ụdị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ụbọchị enyere, yana nọmba nza ga -apụtarịrị nke ọma.
Anyị na -akwado ndị ọbịa ka ha nwee ozi kọntaktị (email na ekwentị) ozugbo nke ndị na -ahụ maka ahụike ma ọ bụ saịtị ụlọ ọgwụ nyere asambodo ahụ, iji kwado ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Enwekwara ike iji saịtị ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi.
A na-agba ndị ọbịa ume ka ha nyochaa ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi ha wee hụ na ha ruru ụkpụrụ anyị, yana nwee akaebe nke nsonaazụ COVID-19 na-adịghị mma, tupu ha agaa na ọdụ ụgbọ mmiri iji gbochie ọnọdụ ebe ha nwere ike ọ gaghị enwe ike ịga njem ma ọ bụ tozuo maka nkwụghachi.
Maka njem ụgbọ mmiri na-apụ na US, CDC chọrọ ọgwụ mgbochi abụọ na usoro ntụtụ 2 ka ọ bụrụ otu. Ha na -anabatakwa ịgwakọta ọgwụ mgbochi mRNA naanị (Pfizer na Moderna). Ọ dịghị ngwakọta ọgwụ mgbochi ọ bụla ọzọ nke na -emezu ihe a ga -ewere dị ka ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ndị Canada ma ọ bụ ndị ọbịa mba ofesi ndị ọzọ jikọtara AstraZeneca na Pfizer bụ ndị CDC na -ahụta na ọ nweghị ọgwụ mgbochi. Ndị ọbịa na -agbabeghị ọgwụ mgbochi ọ bụla, dịka ụkpụrụ ndị a siri dị, a ga -ewere ya dị ka ndị na -enweghị ọgwụ mgbochi yana ọ dị mkpa itinye akwụkwọ maka mwepụ ịgba ọgwụ mgbochi.
Ndị ọbịa a na -enyeghị ọgwụ mgbochi - enweghị atụ na ụkpụrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Ihe ndị achọrọ maka ụgbọ mmiri iji banye n'ọdụ ụgbọ mmiri na mpụga US na -aga n'ihu na Carnival Cruise Line ga -arụ ọrụ na nrube isi n'iwu ndị a. Mwepụ mgbochi mgbochi maka njem ụgbọ mmiri na Caribbean ga -ejedebe na obere ụmụaka na -erubeghị afọ 12, yana ndị nọ n'afọ iri na ụma na ndị okenye nwere ọnọdụ ahụike nwere ike ịnye nkwenye sitere n'aka onye na -ahụ maka ahụike na enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi maka ebumnuche ọgwụ. Ụgbọ mmiri anyị sitere na Florida, Texas, Louisiana, na Maryland ga -arụ ọrụ n'okpuru ụkpụrụ ndị a ruo na Disemba 31, 2021 na -eche na mmachi mgbochi na ugbu a na -agbanwe agbanwe nke ebe ndị amachibidoro ga -adịgide.
Mwepụ mgbochi ọgwụ mgbochi maka ụgbọ mmiri na -apụ na Long Beach, California ga -aga n'ihu na -anabata ya maka ụmụaka nọ n'okpuru afọ 12 yana dịka iwu gọọmentị etiti US siri chọọ (n'ụlọ nke ihe gbasara ahụike yana nkwenkwe okpukpe nwere ezi obi).
Na Carnival Miracle® nke si na Seattle; Carnival Pride® Ọktoba 31, 2021 sitere na Baltimore; Carnival Glory® Nọvemba 28, 2021 sitere na New Orleans; na Carnival Miracle® Nọvemba 28, 2021 site na Long Beach, a ga -anabata nnwere onwe ọgwụ mgbochi dịka iwu siri chọọ.
Enweghi nkwa maka ụmụaka na ndị okenye, a na-ejikwa ikike dabere na ọnụọgụ ndị ọbịa ọgwụ mgbochi tụrụ anya na ha ga-abanye. Ndị ọbịa agbabeghị ịgba ọgwụ mgbochi nyere ikike ka ha rube isi na ụfọdụ ihe achọrọ na usoro iwu, nke gụnyere:
Igosi ule PCR COVID-19 na-adịghị mma na nbanye, ewepụtara n'etiti awa 72 ruo 24 tupu ụbọchị ịkwọ ụgbọ mmiri (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na njem ụgbọ mmiri bụ na Satọde, enwere ike were ule ahụ oge ọ bụla site na Wenezde ruo Fraịde, mana ọ bụghị ututu nke ime emume). Ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa ga -enwerịrị nnwale antigen ọzọ na mbata, wee nwalee ọzọ n'ime awa 24 nke mwepụ na njem ụgbọ mmiri niile karịa ụbọchị 4. A ga -enyocha ego ruru $ 150 maka onye ọ bụla na akaụntụ onye ọbịa nọ n'ụgbọ Sail na Sign iji kpuchie ọnụ ahịa nnwale, mkpesa yana nyocha ahụike na nchekwa. A gụpụrụ ụmụaka na -erubeghị afọ abụọ ihe nnwale chọrọ.
Iwu mkpuchi mkpuchi njem - Ụgbọ mmiri Florida na Texas
Ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi na ụgbọ mmiri na-apụ na Florida ma ọ bụ Texas ga-egosi ihe akaebe mkpuchi mkpuchi njem n'oge nbanye. (Lee ngalaba dị n'okpuru maka nkọwa zuru ezu gbasara ihe mkpuchi mkpuchi njem.)
Akwụkwọ Dọkịta - Ụgbọ mmiri Dabere na Florida, Texas, Louisiana, na Maryland
Ọ bụrụ na ị nwetara ohere ịgba ọgwụ mgbochi maka ihe gbasara ahụike, akwụkwọ ozi sitere n'aka onye na-ahụ maka ahụike na-ekwu na enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi maka ihe gbasara ahụike ga-ebutere nbanye.
Nleta n'ụsọ osimiri na njem mmụta
Ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa enweghị ike ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri n'onwe ha. Ndị ọbịa nwere ike ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na edobere ha na njem afụ nke Carnival kwadoro.
Njem afụ nke Carnival kwadoro bụ njem mmụta na-arụ ọrụ na gburugburu ebe a na-achịkwa. A ga -akpọbata ndị ọbịa n'ụgbọ ahụ gaa njem mmụta ha wee laghachi n'ụgbọ mmiri ozugbo ha si njem mmụta mmiri nke mmiri lọta. Agaghị anabata nkwụsị akwụsịghị oge (ya bụ, ụlọ ahịa onyinye, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, wdg).
N'ọnọdụ ị họrọ ịghara ịzụ njem nlegharị afụ, a na -erepụ njegharị afụ, ma ọ bụ kagbuo n'ihi ihu igwe, ndị ọbịa a na -enwetaghị ọgwụ mgbochi ga -anọrịrị n'ụgbọ.
Ndị ọbịa na -esonye na njem afụ, n'agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi, ga -emerịrị usoro njem niile na ntuziaka mpaghara gbasara nnwale/nyocha, iyi nkpuchi, anya anụ ahụ, wdg. nleta. Dịka ọmụmaatụ, dabere na nkwekọrịta anyị na San Juan, ndị ọbịa a na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ga -anọrịrị n'ụgbọ ahụ n'oge nleta anyị ebe ahụ.
A ga -ewepụ ndị ọbịa na -anaghị erubere ebe a na -achịkwa njegharị afụ na njem ahụ.
Ọ bụrụ na njem ụgbọ mmiri gị na -eleta ọdụ ụgbọ mmiri nkeonwe, dị ka Half Moon Cay na Princess Cays, ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi nwere ike ịpụ n'ikpere mmiri n'onwe ha ma ọ bụ zụta njem anyị.
Biko zoo aka na anyi Laghachi na Ajụjụ Ndị Ọrụ maka ndepụta zuru oke nke usoro iwu na ihe anyị chọrọ, nke na -aga n'ihu na -agbanwe ma nwee ike gbanwee n'enweghị ọkwa.
A ga-etinyerịrị arịrịọ maka mwepụ nke njikwa jisiri ike n'ime awa 48 nke emere ndoputa ọhụrụ. A ga -ahazi arịrịọ mgbe akwụchara ụgwọ akwụkwọ zuru ezu, n'usoro ụbọchị ịkwọ ụgbọ mmiri, na ozugbo anyị mechara ọnụ ahịa ndị ọbịa e mere atụmatụ ime.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọbịa ejighị ọgwụ mgbochi, echeghị ndoputa gị ka ekwenyela ma ọ bụrụ na inwetaghị nnwere onwe akwadoro, nke a ga -enye n'ime ụbọchị 14 nke ịkwọ ụgbọ mmiri. Ndị ọbịa ọ bụla a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nke akwadoro nnwere onwe ha ga -achọ ka ha nyochaa ma kwenye na mgbochi na usoro niile edepụtara n'elu tupu ịbanye ụgbọ mmiri.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịnabata arịrịọ a, ndị ọbịa ga -enwe nhọrọ ịkagbu ndị ọbịa a na -enwetaghị ọgwụ mgbochi site na ndoputa, kwaga na ụbọchị ịkwọ ụgbọ mmiri n'ọdịnihu ma ọ bụ kagbuo ya na nkwụghachi zuru ezu n'ụdị ịkwụ ụgwọ mbụ. Ọ bụ ihe nwute, anyị enweghị ike inye aka na mmefu metụtara arịrịọ a jụrụ ajụ, ndị ọbịa na-ewerekwa ihe egwu niile metụtara ụgwọ njem anaghị akwụghachi (ya bụ, ụgwọ ụgbọ elu, ụlọ nkwari akụ).
Anyị na -amata na ndị ọbịa a na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ga -eche ihe mgbochi nwa oge n'oge mbido mmalite mmalite anyị, yana ụgwọ ndị ọzọ maka nnwale na mkpuchi ma nwee nchekwube na usoro iwu ndị a ga -aga n'ihu na -aga n'ihu ka oge na -aga.
Ndị ọbịa niile na -eme njem ịlaghachi azụ, agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi, ọ ga -adị mkpa ka anwale n'etiti njem.
NKWUKWU NKWUKWU NDỊ njem njem maka ndị ọbịa akpọchiri akpọchi - FLORIDA & TEXAS BASED SHIPS*
Ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi na ụgbọ mmiri na-apụ na Florida ma ọ bụ Texas ga-egosi ihe akaebe mkpuchi mkpuchi njem n'oge nbanye. A na -agbaghara ihe a chọrọ maka ụmụaka na -erubeghị afọ 12 na -erughị eru maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Agbanyeghị, a na -adụ ndị nne na nna ọdụ ka ịzụta mkpuchi mkpuchi njem maka ụmụ ha.
Iwu chọrọ: opekata mpe US $ 10,000, otu onye, ​​na mkpuchi mkpuchi ọgwụ yana mkpuchi US $ 30,000 maka mwepụ ahụike mberede yana na-enweghị mwepu COVID-19.
Iwu mkpuchi ahụ ga -akpọrịrị onye ọbịa a na -anaghị agba ọgwụ mgbochi dịka onye njide iwu ma ọ bụ onye erite uru ma enwere ike zụta ya n'aka ụlọ ọrụ mkpuchi njem nke nhọrọ onye ọbịa ma ọ bụ site na Nchedo Ezumike Carnival, nke gụnyere mkpuchi achọrọ.
Nchedo ezumike Carnival dị maka ịzụta ruo ụbọchị 14 tupu ịkwọ ụgbọ mmiri maka ndị ọbịa bi na US (ewezuga New York na Puerto Rico), Canada (ewezuga Quebec), Virgin Virgin Islands (St. Thomas, St. John na St. Croix) na American Samoa. (Rịba ama: a ga-akwụrịrị akwụkwọ ntinye akwụkwọ gị na ego US.) Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Nchedo ezumike Carnival, biko kpọọ 1-800-CARNIVAL, onye na-eme atụmatụ ezumike nkeonwe gị, ma ọ bụ onye ndụmọdụ njem gị.
A gaghị anabata ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na -enweghị ihe akaebe nke mkpuchi mkpuchi ịkwọ ụgbọ mmiri, a gaghị enyekwa nkwụghachi.
* Dabere na ihe achọrọ ebe ụfọdụ. Ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri nke anyị na -aga na -arụ ọrụ site n'aka ndị mmekọ jikọrọ Carnival n'okpuru ohere gọọmentị ma ọ bụ ikikere.
MGBE AHỤ NKE MAKA AHUA
A ga-agwa ndị ọbịa niile ka ha mechaa ajụjụ gbasara ahụike n'ịntanetị awa iri asaa na abụọ tupu ha akwọ ụgbọ mmiri wee nweta nyocha ahụike ahụike tupu ịmalite, nke ga-agụnye nkwenye nzaghachi nyocha ahụike ha, nkwado nke akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na nyocha COVID-72 ọ bụla achọrọ.
Anyị ga-akpọ onye ọ bụla nwere akara na akara nke COVID-19, ma ọ bụ ndị amatapụtara n'ihe ize ndụ, maka nyocha ahụike ọzọ tupu ikwe ka ha banye. Ndị ọrụ ahụike anyị ga -ahụ ndị ọbịa, a ga -anabata nnabata ịbanye na aka ha. A ga -eme nyocha nke abụọ (yana nyocha ahụike n'oge njem niile) mgbe ọ dị mkpa.
Onye ọbịa ọ bụla nke nwalere ihe ọma na mbata, yana ndị njem ibe ha n'otu ọnụ ụlọ steeti, yana ndị ọzọ na -akpachi anya, agaghị enwe ike ịga njem, a ga -enyekwa ha kredit ụgbọ mmiri n'ọdịnihu. (Mmekọrịta chiri anya bụ onye ọ bụla nọ n'ime ụkwụ isii nke onye butere ọrịa/ihe mgbaàmà maka ngụkọta nke nkeji iri na ise ma ọ bụ karịa n'ime awa iri abụọ na anọ n'ime ụbọchị iri na anọ tupu ịkwọ ụgbọ mmiri.)
Iwu nke Carnival Cruise Line bụ na a ga -enyerịrị onye ọ bụla ọgwụ mgbochi, yana obere ihe dị iche maka ụmụaka na -erubeghị afọ 12 na ndị na -enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi. Ụzọ a karịrị ihe achọrọ maka ụgbọ mmiri ịgba ọgwụ mgbochi n'okpuru nduzi CDC, wee mezuo ihe achọrọ site na ebe anyị na -aga n'ụgbọ mmiri anyị.
Na mgbakwunye na njem ụgbọ mmiri ịgba ọgwụ mgbochi, anyị emejupụtala usoro usoro dị ka akụkụ nke ịmalitegharị anyị, yana ọdịmma ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa anyị, ndị ọrụ ụgbọ mmiri na ebe anyị na -eje ozi dị ka ihe mbụ anyị. N'ihi ikpe dị egwu nke COVID-19 na-eme n'ofe mba ahụ n'etiti ndị a na-agba ọgwụ mgbochi, agbatịkwuru ihe nnwale ụgbọ mmiri anyị gụnyere ndị ọbịa niile. Anyị agbasawanyela ihe nkpuchi anyị chọrọ ka ndị ọbịa na -eyi ihe mkpuchi n'ime ụlọ n'ime oghere ndị mechiri emechi na ebe ndị mmadụ na -ezukọ.
Ọbụlagodi na usoro ndị a dị, enwere ike ịnwe ikpe COVID-19 dị mma n'ụgbọ n'oge ị na-eme njem. Ụgbọ mmiri anyị nwere ebe ahụike nwere ike maka nchoputa na nnwale ma kwadebere maka ịkpọtụrụ kọntaktị. A na -agba ndị ọrụ anyị ọgwụ mgbochi nke ọma ma na -eyi mkpuchi ihu n'ime ụlọ oge niile. Nyere usoro iwu anyị, ikpe dị mma dị n'okpuru ihe obodo na -ahụ n'ikpere mmiri. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ụdị Delta na -ebute ịrị elu n'etiti ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ dị mkpa ka ị mara ozi ndị a:
N'ọnọdụ ihe omume, ndị ọbịa na-akpachi anya ma ọ bụ kpughere onye ọbịa ọ bụla ma ọ bụ onye ọrụ ụgbọ mmiri nke nwalere ihe dị mma maka COVID-19, ma ọ bụ gosipụta ihe mgbaàmà ọ bụla maka ọrịa COVID dị ka njem ụgbọ mmiri, a ga-achọ ka ha na ndị ha na ha na-akpachi anya nweta ihe ọzọ. nnwale na enwere ike ịchọ iche ya n'ime ụlọ steeti ha ruo mgbe ndị otu ahụike mara na ọ dị mma ka ha maliteghachi njem ụgbọ mmiri ha.
Ọ bụrụ na ndị ọbịa ji ụgbọ elu eme njem iji sonye n'ụgbọ mmiri ha wee nwalee nke ọma mgbe a na -eme njem ma ha enweghị ike ịga njem - ma ọ bụ nwalee nke ọma n'oge njem ahụ - enwere ike chọọ ha na ndị ha na ha na -akpachi anya iche tupu ha alawa ụlọ.
Ndị ọbịa akpọpụrụ iche n'ụgbọ a ga-enweta kredit kredit ọdịnihu ga-aha ka ọnụọgụ ụbọchị iche iche.
Maka ndị ọbịa ga -anọrọ iche na mpaghara, Carnival ga -enyere aka mee ndokwa ichepụ iche; agbanyeghị, mmefu niile metụtara ya ga -abụ ọrụ ndị ọbịa.
Anyị na -agba ndị ọbịa niile ume ka ha kpuchie mkpuchi ihu mgbe ha nọ n'ime ụlọ, ọkachasị ndị ọbịa a na -emeghị ọgwụ mgbochi ọrịa, gụnyere ụmụaka na -erubeghị afọ 12 kwesịrị iyi mkpuchi ihu na mpaghara ọha, belụsọ mgbe ha na -eri nri ma ọ bụ na -a drinkingụ. A ga -achọ ka ndị ọbịa niile dị afọ 2 gbagowe nkpuchi ihu na igwe mbuli elu na ebe ntụrụndụ ime ụlọ a họpụtara ahọpụta, ụlọ ahịa niile, yana na cha cha, belụsọ mgbe ha na -eri nri ma ọ bụ na -a drinkingụ. A ga -achọ ndị ọbịa iyi mkpuchi ihu tupu ha anọdụ ala n'ime ụlọ iri nri anyị yana na mpaghara Lido Buffet na oge ụfọdụ na mpaghara ndị ọzọ edepụtara ebe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa nwere ike ịgbakọta (a ga -ebipụta akara). Na mgbakwunye, a na-achọ mkpuchi ihu n'akụkụ ụgbọ mmiri mechiri emechi dị ka spa, salon, na ihe omume ime ụlọ ọ bụla nwere ụmụaka na-erubeghị afọ 12 (ya bụ, Build-A-Bear®, Family Harbor na Sky Zone®).
Ndị ọbịa niile ga-eyi ihe mkpuchi ihu n'oge usoro mgbatị ahụ na mbubata ya niile (n'ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri oku, gụnyere usoro mbubata mbata), n'oge njem ọ bụla n'ụsọ mmiri Carnival kwadoro yana mgbe ọ nọ n'ụgbọ njem ọ bụla, gụnyere ụgbọ mmiri. Na mgbakwunye, mgbe ị na -aga n'ikpere mmiri, ndị ọbịa ga -adị njikere ịgbaso ntuziaka mpaghara niile gbasara nkpuchi na anya anụ ahụ. A ga -eso ndị ọbịa kerịta ọkwa ntụzịaka mpaghara tupu ikewapụ ebe a na -aga.
IHE: Ndị ọrụ ahụike Alaska na -enyocha ọnọdụ dị n'ikpere mmiri na -atụ aro nke ọma na ndị ọbịa niile, gụnyere ndị nwere ọgwụ mgbochi zuru oke, na -eyi mkpuchi ihu mgbe niile mgbe ha nọ n'ime ụlọ na n'èzí mgbe enweghị ike idobe anya anụ ahụ. Iwu US chọrọ ka mmadụ niile kpuchie mkpuchi ihu na njem ọha gụnyere ụgbọ ala, ụgbọ oloko, ụgbọ ala, ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ elu na ụgbọ mmiri.
Achọghị ndị ọbịa gbara ọgwụ mgbochi ka ha nọrọ ebe dị anya n'ụgbọ ahụ.
A na -atụ aro ka ndị ọbịa a na -enyeghị ọgwụ mgbochi debe ịdị anya anụ ahụ dị ka ndị a:
N'ime ụlọ - Nọrọnụ opekata mpe 6 site na ndị ọzọ anọghị na ndị otu gị na -eme njem njem. Dị ka nke a, anyị na -agba gị ume ka ị na -arịgo steepụ mgbe ọ bụla enwere ike, ọ bụrụ na ị ga -emeli ya.
N'èzí - Nọrọnụ opekata mpe ụkwụ atọ n'ebe ndị ọzọ nọ mgbe ị na -eyighị nkpuchi ma ọ bụghị n'ìgwè ndị njem gị.
Mmemme ndị ntorobịa & ZONE SKY®
Camp Ocean ™: Agaghị enye mmemme ụmụaka a na -elekọta maka ụmụaka na -erubeghị afọ 12 na Camp Ocean n'oge a.
Gburugburu “C” ® & CLUB O2®: Agaghị anabata ndị ntorobịa na ndị nọ n'afọ iri na ụma isonye na mmemme ndị ntorobịa Circle “C” na CLUB O2, ma ọ bụ nweta Sky Zone® ma ọ bụrụ na ha na -eme njem na Carnival Panorama®.
CASINO - EBERE SEPTEMBER 8, 2021
Iji kwalite nchekwa, ịdọpụ uche anụ ahụ na ahụike ọha, anyị emelitela usoro ịgba cha cha anyị nọ na Satọde, Septemba 11.
Casinos bụ maka ndị egwuregwu na ndị enyi ha naanị; enweghị nnọkọ na casinos ọzọ.
Edebere oche na tebụl egwuregwu na oghere maka naanị ndị egwuregwu.
Enweghị anwụrụ na cha cha ma ọ bụrụ na ịnọdụ ala na -egwu egwu.
Agaghị anabata ịse anwụrụ n'ime cha cha mgbe emechiri.
A ga -atụ anya na ndị ọbịa ga -eyi ihe mkpuchi ihu ọ gwụla ma ha na -ese anwụrụ ma ọ bụ na -a drinkingụ ihe ọverageụ theirụ ha.
Emechiri ụlọ mmanya cha cha; Ndị ọrụ mmanya anyị ga -enyefe ndị na -egwu cha cha ihe ọ drinksụ drinksụ.
Anyị na -enwe ekele maka nkwado ndị ọbịa anyị na -akwado usoro ndị a nke eburu n'uche maka ọdịmma onye ọ bụla.
Ahụmịhe SHORESIDE dị nchebe
Ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi nwere ike isonye na njegharị ejegharị ejegharị ejegharị na nlegharị anya onwe ha. Ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa enweghị ike ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri n'onwe ha. Ndị ọbịa nwere ike ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na edobere ha na njem afụ nke Carnival kwadoro. Agbanyeghị, ọ bụrụ na njem ụgbọ mmiri ha na -eleta ọdụ ụgbọ mmiri nkeonwe, dị ka Half Moon Cay na Princess Cays, ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi nwere ike ịpụ n'ikpere mmiri n'onwe ha ma ọ bụ zụta njem anyị.
Ọ ga -adị mkpa ịgbaso usoro ahụike ahụike maka ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla anyị gara, nke dị n'okpuru ndị ọchịchị obodo ma nwee ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa. Ndị ọbịa ga -abịa dị njikere ịgbaso ntuziaka mpaghara metụtara ihe nkpuchi, ịdọpụ uche anụ ahụ, nnwale/nyocha ahụike, wdg.
IHE: Ihe ndị anyị na -achọ ga -aga n'ihu na -amalite ma dabere na nkwekọrịta ọdụ ụgbọ mmiri anyị na San Juan, ndị ọbịa a na -enwetaghị ọgwụ mgbochi ga -anọrịrị n'oge oku ahụ.
AHỤ AHỤ NA -AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ ONBOARD
Biko nyere anyị aka ịnọgide na-enwe gburugburu ebe obibi dị mma site na iji ihe nhicha aka na ihe nhicha aka na-abanye n'ọnụ ụzọ ebe a na-eme mkpọtụ na mpaghara okporo ụzọ. Anyị ga-achọkwa ndị ọbịa ịgbaso ntuziaka anyị gbasara ụzọ isi nọrọ na ahụike n'ụgbọ mmiri na mgbe ị na-aga n'ikpere mmiri, site na mmemme kwa ụbọchị, sistemụ ntụrụndụ, ọkwa, akwụkwọ ime ụlọ, yana ngwa Carnival HUB.
N'ihi usoro mgbatị ọhụrụ, ndị ọbịa niile ga-emerịrị nbanye n'ịntanetị wee họrọ nhọpụta abịarute. Nbanye Ntanetị dị maka ndị ọbịa Suite, Platinum na Diamond na ụbọchị 16 tupu ịkwọ ụgbọ mmiri; Nnweta izugbe na -amalite na ụbọchị 14 tupu ịkwọ ụgbọ mmiri. Ọ dị mkpa na ndị ọbịa na -abịarute n'oge nke ọma ebe a na -enweghị ike ịnabata ndị bịarutere n'oge, a ga -ajụkwa ha ka ha laghachite n'oge enyere ha. Site na nkwado nke onye ọ bụla, anyị nwere ike rụkọọ ọrụ ọnụ iji kwe nkwa ọpụpụ oge na mmalite ezumike gị!
AKWỤKWỌ CARNIVAL iji rụọ ọrụ ụgbọ mmiri ndị a site na Disemba 31, 2021 N'okpuru ụkpụrụ njigide ọgwụ mgbochi:
Carnival Vista® si na Galveston
Carnival Horizon® sitere na Miami
Carnival Breeze® nke si Galveston
Carnival Miracle® sitere na Seattle
Mardi Gras ™ ️ si Port Canaveral
Carnival Magic® si na Port Canaveral
Carnival Sunrise® si na Miami
Carnival Panorama® si na Long Beach
Carnival Pride® si na Baltimore; Ụgbọ mmiri na -amalite na Septemba 12, 2021
Carnival Dream® nke si Galveston; Ụgbọ mmiri na -amalite na Septemba 19, 2021
Carnival Glory® nke sitere na New Orleans; Ụgbọ mmiri na -amalite na Septemba 19, 2021
Carnival Miracle® si na Long Beach; Ụgbọ mmiri na -amalite na Septemba 27, 2021
Nnwere onwe Carnival® si Miami; Ụgbọ mmiri na -amalite na Ọktoba 9, 2021
Carnival Elation® si na Port Canaveral; Ụgbọ mmiri na -amalite na Ọktoba 11, 2021
Carnival Valor® nke si New Orleans; Ụgbọ mmiri na -amalite na Nọvemba 1, 2021
Carnival Legend® sitere na Baltimore; Ụgbọ mmiri na -amalite na Nọvemba 14, 2021
Carnival Pride® nke si Tampa; Ụgbọ mmiri na -amalite na Nọvemba 14, 2021
Carnival Conquest® si Miami; Ụgbọ mmiri na -amalite na Disemba 13, 2021
Carnival Radiance® si na Long Beach; Ụgbọ mmiri na -amalite na Disemba 13, 2021